Mapepa Anotengeswa mu Zimbabwe
Unoda rubatsiro rwehunyanzvi kunyora? Tora bepa remhando yepamusoro kubva kune akanakisa maEssay Anotengeswa mu Zimbabwe yakanyorerwa kumatanho ese edzidzo.
Zvinyorwa zvinotengeswa - Zvakakosha Izvo Here?
Kana iwe usati wafunga nezve kutora pre-yakanyorwa zvinyorwa zvekutenga online, wadii kuzvipa iyo pfuti ipapo ipapo kuti uone kana iwe uchizowana mibairo yakanaka. Zvisinei nezverudzii rwerondedzero iwe raunoda kunyora, pane akawanda masampuli aunofanira kuona kubva kudziva revanyanzvi. Izvi zvinokubatsira iwe kuona kuti chairo pepa rinobuda sei kana iwe uchinge wakwanisa kuita kuti basa riitwe.
Kana iwe uri kutsvaga chinyorwa kuti unyore kutengesa masevhisi ako, saka ungangoda kufunga nezvekushandisa sevhisi iyo inopa iyi mhando yekunyora sevhisi. Aya masevhisi anopa zvinyorwa sevhisi. Ivo havabhadharise kwauri. Ivo vanongokumbira iwe mubhadharo kana iwe uchishandisa yavo sevhisi. Aya masevhisi anowanzo bhadharisa madhora makumi matatu.
Chikamu chakanakisa ndechekuti kana iwe uchinge wabhadhara muripo, iwe unowana zvese zvinyorwa zvavanokutumira iwe. Kana iwe uchinetseka kuti iwe waizowana kupi zvinhu zvekunyora kwako kubva, iyi ndiyo imwe mhinduro yaunofanira kufunga nezvayo. Iwe hausi kuzobhadhara zvinhu zvinodhura zvekunyora semabhuku kana magazini. Izvo zvinoshandiswa zvinouya zviri nyore kushandisa mafomati emagetsi kuti ugone kutora nguva yako nekunyora kwako. Unogona kunge uchinyora zvinyorwa kupera kwezuva uye kupedza basa kupera kwevhiki kana kwevhiki.
Kana iwe uchida kutsvagisa rondedzero yako usati watanga, iwe uchaona kuti online online rondedzero sevhisi haingopi chete iyo yekunyora rondedzero asi zvakare inokuzivisa iwe nezve izvo zvinyorwa zvinyorwa zviri kushandiswa kunyora. Paunenge iwe wasarudza musoro wenyaya uye munyori, vanyori vanozokwanisawo kukuudza iwe zvese izvo zvinhu zvavanogona kuchinja mune zvemukati zvichibva pane zvaunotsanangudza.
Muzviitiko zvakawanda, masevhisi aya achapawo matipi ekuvandudza rondedzero yako, zvinoreva kuti haungogone kuziva zvekunyora chete, asi zvakare unoziva maitiro ekuita kuti rondedzero irinani kupfuura yauri kushanda parizvino. Ese aya masevhisi anowanikwa pamutengo unonzwisisika. Iwe unozochengetedza mari zhinji yaungadai wakashandisa kana iwe waizohaya yekunyora sevhisi yekunyora kwenyaya dzako. Kana iwe uchikwanisa kuti rondedzero iitwe nemumwe munhu, iye kana iye anozogona kubhadharisa mutengo wakakwira.
Kune vazhinji vanyori vepaindaneti vanyori vaunogona kuhaya izvo zvinokutendera iwe kuti ugadzire yako yega chinyorwa, kunyangwe kana zvisiri izvo chaizvo zvauri kutsvaga. Ivo vachatora yako pepa uye voishandura kuva runyorwa.
Sezvaunoshanda pane zvinyorwa, unogona kuenderera mberi nekuwedzera mazano ako kumagwaro akapera, kana iwe unogona kuenderera uchiteerera kune vanyori vane hunyanzvi vari kushanda pane ako zvinyorwa. Iwe unogona kunyange kuwana mhinduro kubva kune nyanzvi dziri kukubatsira iwe. Chinhu chakakosha ndechekuti iwe uwane mhedzisiro yakanaka uye kuti unonzwa kuti munyori ane ruzivo pane izvo zvinodiwa kwaari.
Kana iwe uine chinyorwa chinoda kuburitswa ipapo ipapo, ungangoda kutarisa mukati memasevhisi eanoshanda ezvinyorwa zvemunyori anozobata iko kunyorera iwe. Vachaita kuti basa riitwe nekukurumidza. Iwe zvakare uchachengetedza nguva nemari nekuti ivo havafanirwe kushandisa nguva yekugadzirisa nekuverenga rondedzero yako. Izvi zvinokutendera iwe kunyora iro gwaro nekukurumidza uye kuripedza pachirongwa chinoshanda kwauri.